သူရဲ့ပရိသတ်တွေကို မကြာခင်မှာ ဖခင်ဖြစ်တော့မယ့်အကြောင်း ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ ဘုန်းလျှံ – Cele Top Stars
November 6, 2021 By admin2News
ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ ဘုန်းလျှံ ကတော့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပါ။ ဘုန်းလျှံ ကတော့ ဇနီးချောလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဇနီးသည်ကလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားတာကြောင့် စုံတွဲလိုက်ကို ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားပါတယ်…။
ဘုန်းလျှံ ကတော့ ဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ သူတို့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဝမ်းသာစရာသတင်းလေးတစ်ခုကို အခုလိုပဲ မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ “မွေးနေ့လက်ဆောင်ဘာပေးမှာလဲမေးတော့..လက်ဆောင်ကအကြီးကြီးပေးလိုက်တာပဲ.အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်မိန်းမရေ..ဖခင်ကောင်းတယောက်ပီသစေရမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်နော်.love u. ဒီတခါတော့ သေချာပြီထင်တယ်ဗျ.” ဆိုပြီး ဇနီးချောလေးမှာကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်းကို ဝမ်သာစွာနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုလည်း အသိပေး လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
ပရိသတ်တွေနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနုပညာရှင်တွေကလည်း မကြာခင်မှာ ဖခင်လောင်းဖြစ်တော့မယ့် ဘုန်းလျှံအတွက် ဝမ်းသာကြောင်းနဲ့ ဂုဏ်ယူကြောင်း မှတ်ချက်ပေးနေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးတွေထဲက ဘုန်းလျှံ ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် ဘုန်းလျှံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒီဝမ်းသာစရာ သတင်းကောင်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော်…။
ခဈြလှစှာသော ပရိသတျကွီးရေ ဘုနျးလြှံ ကတော့ သရုပျဆောငျ တဈယောကျအနနေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးခဈြခငျမှုကို ရရှိထားတဲ့ ပရိသတျအခဈြတျော သရုပျဆောငျတဈယောကျပါ။ ဘုနျးလြှံ ကတော့ ဇနီးခြောလေးကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး ဇနီးသညျကလညျး ပရိသတျတှရေဲ့ခဈြခငျမှုကိုရရှိထားတာကွောငျ့ စုံတှဲလိုကျကို ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျမှုကို ရရှိထားပါတယျ…။
ဘုနျးလြှံ ကတော့ ဒီနမှေ့ာသူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ သူတို့ အိမျထောငျရေးနဲ့ပတျသကျလို့ ဝမျးသာစရာသတငျးလေးတဈခုကို အခုလိုပဲ မြှဝလောခဲ့ပါတယျ။ “မှေးနလေ့ကျဆောငျဘာပေးမှာလဲမေးတော့..လကျဆောငျကအကွီးကွီးပေးလိုကျတာပဲ.အရမျးဝမျးသာပါတယျမိနျးမရေ..ဖခငျကောငျးတယောကျပီသစရေမယျလို့ကတိပေးပါတယျနျော.love u. ဒီတခါတော့ သခြောပွီထငျတယျဗြ.” ဆိုပွီး ဇနီးခြောလေးမှာကိုယျဝနျရှိနကွေောငျးကို ဝမျသာစှာနဲ့ ပရိသတျတှကေိုလညျး အသိပေး လာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ…။
ပရိသတျတှနေဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျအနုပညာရှငျတှကေလညျး မကွာခငျမှာ ဖခငျလောငျးဖွဈတော့မယျ့ ဘုနျးလြှံအတှကျ ဝမျးသာကွောငျးနဲ့ ဂုဏျယူကွောငျး မှတျခကျြပေးနခေဲ့ကွပါသေးတယျ။ ပရိသတျကွီးတှထေဲက ဘုနျးလြှံ ရဲ့ပရိသတျတှအေတှကျ ဘုနျးလြှံနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဒီဝမျးသာစရာ သတငျးကောငျးလေးကို ပွနျလညျမြှဝဖေျောပွလိုကျပါတယျနျော…။